"Nuti akka gosa Keenyaa malee gosa Oromoo yookiin Boranaatti of hin ilaallu" - BBC News Afaan Oromoo
"Nuti akka gosa Keenyaa malee gosa Oromoo yookiin Boranaatti of hin ilaallu"
Goodayyaa suuraa Piroofeesar Guyyoo Jaldeessa
Piroofeesar Guyyoo Jaldeessaa jedhamu. Dhalatanii kan guddatan Sololotti yoo ta'u barnootaa isaanii sadarkaa tokkoffaa achumatti baratan. Barnootaa sadarkaa lammaffaa immoo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Garba Tuulaatti baratan.
Ega barnootaa isaanii sadarkaa lammaffaa xumuran booda yuunivarsiitii Naayiroobiitti gosa barnootaa meedisiiniitiin eebbifaman.
Ammatti ogummaa isaanii cimsachuun gosa ogummaa fayyaa 'Gynecology' yookiin ogummaa yaala gadameessaatiin ispeeshaalaayiiz gochuun hospitaalaa Naayiroobii keessatti hojjachaa jiru.
Akka piroofeesar Guyyoon jedhanitti namni Oromoo ta'ee hospitaalaa kana keessatti hojjatu isaan qofa.
"Lakkoofsi ogeeyyii Oromoo biyya kanaa akka ogeessota Oromiyaa yookiin Itoophiyaa keessa jiranii baay'ee miti. Ijoolleen Oromoo baay'een baratanii bakka guddaa gahaan ni jiru, garuu lakkoofsaan xiqqaadha."
Hirriba waliin walqabatee 'wantoota fayyaa keessan miidhan'
Baatii tokko alkoolii malee turuun fayyaa keessaniif
Piroofeesar waa'ee Oromummaa isaanii akkas jedhu, "Keenyaa keessa namoota gosa baay'eetu jiru. Gosoonni kunneen barnootaan fagaatanii jiru" jedhu.
"Nullee gosoota saniin waliin dorgomutti jirra malee akka Oromoo yookiin Boranaatti of ilaalutti hin jirru. Keeniyaa keessatti gosti baay'eetu jira. Nullee akkuma nama Keenyaa tokkotti of ilaalla."
Piroofeesar Guyyoon miira guyyaa duraa haadha deesisan akkasitti yaadutu, "dura garuu osoo barnootaa hin xumuriin akkamiitii akka deesisnu barannee ture. Guyyaa duraa ni gammadda, waan guddoo. Turtiin booda garuu hojiima. Itti barta."
"Yeroo baay'ee haadholiin dhibba keessaa %80 ta'an rakkoo tokko malee nagaan dahu. Hojiin keenyaan guddaan rakkoo %20 san yaaluudha."
"Hojiin keenya akka haadhoon ijoollee argachuu barbaadan rakkoo tokko malee ijoollee argatanfi ijoolleenillee kan fayyaa qabaatan gochuudha."
Hojii kiyya keessatti waanni na gammachiisu rakkoo haadholii furuudha. Hojiichi hojii dhukkubsatoota yaaluu qofa miti jedhu.
"Rabbiin waliin al-tokkotti lubbuu namoota lamaatti kan baraarru. Gammachuun kana caaluu immoo hin jiru", jechuun miiraa isaanii ibsu.
Hojiin keenya hojii akka ogummaatti ilaalamu qofa miti, rakkoo namaas kan itti furtudha. Hojii ati hojjattee ofii keetii gammaddee namoonni biraas itti gammadaniidha kanaaf hojii kiyyaatti baay'ee boonaa jedhu Piroofeesar Guyyoon.
Piroofeesar Guyyoon waraqaa eebbaa isaanii dhiibaa dhaqna qabaa dubartootaa irraan gahurratti kan hojjatan. Hojii isaanii kanaanis biyyoota Awurrooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa biroofi Laatiin Ameerikaa deemuudhaan ogeesota birootiif muxannoo isaanii qoodanii jiru.
Bu'aa sochiin qaamaa idilee fayyaa sammuuf qabu
Piroofeesar hojii isaanii ogeeyyii fayyaafi hawaasaa Keeniyaa keessatti hojjataniif bara 2018 mootummaa Keeniyaarra badhaasa argataniiru. Badhaasichis gahee isaanii dhaqna qabaa dubartootaa hir'isuurratti gumachaniif kan mootummaan isaan badhaasedha.
Waggoota lama dura gara Itoophiyaa deemuun ogeeyyii ogummaa kana keessa jiraaniif leenjii keennaniiru. Akkasumas muxannoo isaanii biyyoota birootii argatan turtii isaan Itoophiyaatti dabarsaniin ogeesotaaf qoodaniiru.
Goodayyaa suuraa Badhaasaa isaan bara 2018 argatan
Bishooftuu deemuudhaanis Oromoota miliyoonaan lakka'aman waliin Irreecharratti argamuun kabajaniiru.
Piroofeesar Guyyoon mudannoo isaanii haadha Oromoo tokko waliin dabarsan akkanatti yaadatu, "Intalli haadhafi abbaa hin qabdu, garuu heerumtee jirti.
Dhukkubsattu kaansarii turte. Yeroo sanitti baay'ee dhukkubsattee waan turteef dhiirsi dhiisaa nan galadhaanii jedhe.
Anis yeroo san waardii ture. Booda osoo isiin yaalaa hin argatiin asii hin baatu jedhee dhorkee. Amma fayyite ijoollee afur deettee jirti."
Argitee gargaasa akkanaa waan dandeette mallaqaan bitattu miti jechuun gammachuu yeroo san ture yaadatu piroofeesar Guyyoon.
"Hojii keenya keessatti waan hamtuun akka du'aa hin jirtu. Haati ati hordooftu du'uun yookiin daa'imin dhalate du'u arguun hamaadha.
Galata Rabbii hamma ammatti dhukkubsataan harka kiyyatti du'e tokkollee hin jiru."
Hospitaalichi kan dhuunyaa waan ta'eef Oromoonni baay'een maallaqa guddaa baasanii yaalamuuf humna gahaa hin qabani.
Kanaaf karoorri kiyyaa guddaan dhukkubsatootaa afaan kiyya dubbatan yaala gahaa akka argatan gochuudha jedhu piroofeesar Guyyoon.